दरबार हत्याकाण्ड किन रहस्यमै राखिनुका कारणहरु ! (भिडियो सहित) |
2 June, 2018 | Sandeep Bhattarai | 10780 Views | comments
आज जेठ १९ गते । सारा नेपालीलाई स्तब्ध पार्दै शोकमा डुबाएको दिन, नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा अत्यधिक लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको दिन, नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानको हत्या भएको त्यो कालो दिन ।
२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार नारायणहिटी राजदरबारमा चलिरहेको पारिवारिक भोजमा विश्व हल्लाउने गरी भएको त्यो हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय नै छ । घटना तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले गराएको छानबिन समितिको निष्कर्ष रह्यो, तर नेपाली जनता यो मान्न तयार छैनन् । यो षड्यन्त्रात्मक हत्याकाण्ड लुकाउन खोजिएको भनिन्छ ।
दरबार हत्याकाण्ड कसले रच्यो ? यसको उद्देश्य के थियो । धेरैको आआफ्नै तर्क छ । तर्क आआफ्नो आस्था अनुसार छ । वस्तुनिष्ठ तर्क वा विश्लेषण कसैको पनि छैन । राज्यले पनि यो घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने दायित्व सम्झेको छैन । राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि नयाँ राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा बसे । तर, उनीमाथि नै आरोपका औंला तेस्र्याइयो । दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यको विजारोपण त भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै कर्म र बाहिरी शक्तिको जोड यसमा थियो । यसैकारण मुलुक बाह्य हस्तक्षेपको शिकार भयो ।
भारतले नेपालबाट उसले भनेको जस्तो भएन भने केसम्म गर्छ भन्ने उदाहरण त संविधान जारी भएपछि लगाएको नाकाबन्दी र विश्वभरि नेपालको संविधानले विभेद गरेको भन्दै प्रचारमा उत्रिएको घटनाले नै देखाउँछ । राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र अनि छोटो कार्यकालमा ज्ञानेन्द्रले भारतीय हैकमका बिरुद्ध लडेकै हुन् । ज्ञानेन्द्रले पनि भारतको कुरा मानेका भए १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हुने नै थिएन भन्नेहरु अहिले पनि कलम चलाइरहेका छन् ।
राजा वीरेन्द्र विदेशीको गुलाम भएर बस्नुभन्दा आफ्नै जनतालाई अधिकार दिएर संविधानभित्र बस्नु जाति भन्दै प्रजातन्त्र दिएका स्व. राजा वीरेन्द्र नेपाली जनतामाझ अत्यन्त लोकप्रिय थिए । भारतीयलाई नागरिकताा दिने विधेयक अस्वीकृत गर्नु, भारतले भुटानको हैसियतमा बस्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु वीरेन्द्रको देशभक्तिपूर्ण निर्णय थियो ।
राजा वीरेन्द्र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा दृढ थिए । भारतीय प्रभुत्ववादविरूद्ध प्रशंसायोग्य अडान लिएका कारण नेपाली जनताले गर्वका साथ लिने नाम हो । राष्ट्रियताप्रतिको वीरेन्द्रको अडान इतिहासले सधैं सम्झनेछ । राजा वीरेन्द्रले भारतीय आक्रामकताको सामना गरेर नेपाललाई पटकपटक जोगाएका छन् । वीरेन्द्र राजा बन्नेबित्तिकै तिब्बती खम्पाहरू विरूद्ध सैन्य कारबाही गरे, जसबाट भारत–अमेरिका दुवै चिढिए । चीनले सबभन्दा निकटको मित्र ठान्यो वीरेन्द्रलाई । अनि राजपरिवार र भारतको तत्कालीन सत्तारूढ गान्धी परिवारबीच कहिल्यै विश्वासको सम्बन्ध रहेन ।
यही तिक्ततापूर्ण सम्बन्धकाबीच तत्कालीन सरकारले २०४५ सालमा चीनबाट विमानभेदी अस्त्रहरू ल्याएपछि भारतले नाकाबन्दी नै लगाइदियो । यो नाकाबन्दी पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनको जग बन्यो र भारतले समर्थन गर्यो । आन्दोलन मत्थर बनाउन दरबारलाई भुटानको हैसितमा रहने शर्तसहितको सम्झौताको मस्यौदा पठायो । त्यसमा हस्ताक्षर गरेको भए नेपाल भुटानको हैसियतमा पुग्थ्यो र आजसम्म राजतन्त्रको निरन्तरता हुनसक्थ्यो होला । तर, राजा वीरेन्द्रले त्यो काम गरेनन् । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको भूमिका पनि अहम् छ । राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री मरिचमानले नेपाललाई भारतको अघोषित उपनिवेशष बन्नबाट जोगाए, जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगै सम्झौता गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरे ।
भारतीय प्रभुत्ववादविरूद्ध प्रशंसायोग्य अडान लिएका कारण नेपाली जनताले गर्वका साथ लिने नाम हो । राष्ट्रियताप्रतिको वीरेन्द्रको अडान इतिहासले सधैं सम्झनेछ । राजा वीरेन्द्रले भारतीय आक्रामकताको सामना गरेर नेपाललाई पटकपटक जोगाए
यी र यस्ता काम र अडानहरूका कारण राजा वीरेन्द्र नेपालीको मानसपटलमा सधैं चिरस्मरणीय रहेका छन् । तर प्रश्न यी राजाको परिवारकै वंश विनाश गर्ने को हो ? के छानबिन समितिले भनेजस्तै नशाको सुरमा दीपेन्द्रले नै त्यो हत्याकाण्ड मच्चाएका थिए वा बाहिरी शक्तिको हात थियो ? यो रहस्य कुनै न कुनै दिन अवश्य सार्वजनिक होला ?
हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका १० जनाको हत्या भएको थियो । हत्यामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारीहरू श्रुति, शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह, शारदा राज्यलक्ष्मी शाह, शाहज्यादी जयन्ती राज्यलक्ष्मी शाह, कुमार खड्गविक्रम शाह र धीरेन्द्र शाहको हत्या भएको थियो । घटनामा कोमल शाह, शोभा शाही, कुमार गोरखशमशेर र केतकी चेस्टर घाइते भएका थिए ।
यो घटनाको छानबिनन समितिले सबैको हत्या गरिसकेपछि तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो र हत्याको कारण दीपेन्द्र र देवियानी राणाबीचको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको असहमति रहेको बताइन्छ । यो घटना जति रहस्यमय छ यसभित्र अनेक षड्यन्त्र लुकेको आशंका अहिले पनि कायमै छ । जवसम्म हत्याकाण्डको यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुँदैनन तबसम्म यस्ता आशंका र तर्कहरू चलिनै रहनेछन् ।
दरबार हत्याकाण्डपछि वीरेन्द्रका माइला भाई ज्ञानेन्द्र राजा बनेपछि उनीमाथि नै हत्याको आरोप नियोजित रुपमा लगाइयो । शाहवंशीय राजतन्त्रको निरन्तरताको क्रमभंग भएको त्यो घटनापछि नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल नै आयो । मुलुकमा गणतन्त्रको बीउ रोपियो, माओवादी विद्रोह शान्तिमा परिणत भयो । १९ दिने जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे । त्यही प्रतिनिधिसभामा माओवादीका सांसद मनोनित भए अनि “प्रतिनिधिसभा घोषणा”मार्फत राजाका अधिकार कटौती गरिए । राजा नाम मात्रका भए । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन भयो र २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा गर्यो ।
वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजा भएको ज्ञानेन्द्रले जनअभिमतको सम्मान गर्दै राजगद्दी त्यागे शान्तिपूर्वक । उनले कुनै आलटाल गरेनन् । तर, जाँदा जाँदै उनले आफूमाथि लागेको हत्याको आरोपको खण्डन गरे । २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटी छाड्नुअघि १५ मिनेट लामो लिखित मन्तव्यबाट ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रको वंशनाशमा आफूमाथि लागेको आरोपको खुला खण्डन गरे ।
राजा वीरेन्द्रले भारतीय आक्रामकताको सामना गरेर नेपाललाई पटकपटक जोगाएका छन् । वीरेन्द्र राजा बन्नेबित्तिकै तिब्बती खम्पाहरू विरूद्ध सैन्य कारबाही गरे, जसबाट भारत–अमेरिका दुवै चिढिए ।
उनले भने– “राजदरवारमा मेरो पूजनीय दाजु भाउजु लगायत आफ्ना आत्मीय परिवारको विभत्स विनाश भएको र ती आदरणीय परिवारको शवमा आँसु बगाएर मन हलुका पार्ने मौका समेत पाउन नसक्ने परम्परा र कर्तव्यको जन्जिरमा बाँच्न विवश मेरो अन्तरवेदना शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ” ।
त्यतिबेला राजपरिवारलाई चारैतिरबाट प्रहारको निशाना बनाइएको थियो । अनि निकै दुःखी हुँदै ज्ञानेन्द्रले भने– “सो अवस्था र घटनालाई लिएर कतिले अत्यन्त निर्दयितापूर्वक आफू र आफ्नो परिवारमाथि लगाएको कठोर आरोप र लाञ्छनालाई सहनुवाहेक न त कुनै उपाय नै थियो, न त हाम्रो तर्फबाट बोलिदिने कोही थिए । तत्कालीन परिस्थिति र घटनाबाट फाइदा उठाउन र म र मेरो परिवारप्रति पूर्वाग्रही भै विभिन्न माध्यमबाट बदनाम गर्ने काम निरन्तर भैरह्यो । जुन मेरा लागि अति दु:खदायी थियो र छ पनि ।”
वीरेन्द्रको वंश विनाशको पाटोलाई लिएर गरिने अनेक विश्लेषणका पछाडि कति दम छ त्यो यसै भन्न सकिन्न । तर, घटनाको सूक्ष्म र गम्भीर अनुसन्धान भने भएको छैन र आज गणतन्त्र नेपालमा राजतन्त्रको त्यो कहालिलाग्दो घटनाको छानबिन हुनुपर्ने औचित्य जिम्मेवारहरुले ठानेकै छैनन् । यस्ता लोकप्रिय राजा र उनको परिवारको विनाश नशाको सुरमा युवराजले नै गरेको हो भनेर पत्याउन अहिले पनि कोही तयार छैनन्, तर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउँदासम्म केही भन्न सकिन्न ।
अन्त्यमा राजा वीरेन्द्रसहित उनको परिवारप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
#दरबार हत्याकाण्ड किन रहस्यमै राखिनुका कारणहरु ! (भिडियो सहित)